MIRIMI 100 NE160 CURRENCIES DZINOBATSIRWA! - shoppingdirect24.com - SD24
musha > MIRIMI 100 NE160 CURRENCIES DZINOBATSIRWA!
Ndapota sarudza mari yako yepamusoro nechepamusoro kana isina kugoverwa kamwe!
Iwe ucharatidzirwa zvigadzirwa zvemitengo mune mari yemunyika yako.
Tinopa mimwe mitauro ye100 uye nezvemari ye 160.
Iyo yose yekutenga kubva pakutsvaga kuenda ku checkout iri mumutauro wako wakasarudzwa uye mari!
Isu tinodada kupa zvinhu izvi uye tinogutsikana kuti kwete mamwe mabhizimisi anokwikwidzana naro!
TENGA MUZVIMBO YENYU YAKO UYE KUDZIDZA BADZIDZIDZO DZAKADZIDZWA NOKUDZIDZA DZIMWE NOKUDZIDZWA KWAKO NEBANK YENYU kana CREDIT CARD COMPANY!
Mari inoshandurudzwa inofanana neiyo nguva inowanikwa. EURO nezvimwe-kupfuura-EURO zvinowanzoenderana. Kwete mahofisi kana kuti kuchinja kwekushandiswa kunoshandiswa.
Ndapota chengetedza e-akhawunti uye usayina pamusoro - iwe uchafanira kuudza mashoko okubhadhara kamwechete chete nokuda kwekuchengetedzwa kwemamiriro ezvinhu uye urongwa huchayeuka paunotevera kushanyira.
Ndapota sarudza mutauro wako pamusoro kana usina kusarudzwa!
Yese shopu inowanikwa mune zvinyorwa zvinopfuura 100!
Mutauro woga woga une zvinyorwa zvayo, imwe neimwe iyo yakanyoreswa mumitambo yakasiyana-siyana yekutsvaga yekutengesa, kuitira kuti shopu iwanike sewe nzvimbo yakasiyana mumutauro wako, se:
shoppingdirect24.com - iyo nzvimbo huru muChirungu, mutauro wekutanga
de.shoppingdirect24.com - the shop in Shona
Izvo zvinonzwisisika zvakafanana kune mimwe mitauro yakasara.
Kana iri Bulgarian, Arabic, Galician kana Greek, Japanese, Chinese, Hebrew, Indonesian, Hindi, etc. Mimwe mitauro iripo. Kungosarudza kubva pakusarudza kwebhokisi.
Shanduro yemutauro inowanikwa kubva kune chinyorwa cheChirungu sezvo rurimi rwemashoko uye shanduro yehutano neural level, kwete kungoshandura kunyanya kushandiswa semuenzaniso muGoogle Translate.
Nokuda kwezvikwereti zvechitoro zvinopa basa rokutsvaga rinofanira kuitwa kwenguva pfupi mumashoko echiRungu, pasinei neshoko rakasarudzwa rekutoro.